समाचार – Hot Post News
प्रेममा धोका पाएपछि मानिसले के-के गर्लान् ? हात का’ट्ने र आ’**’त्या गर्ने गरेका विषय नौला होइनन् । काठमाडौंको बौद्धमा भने अर्को एउटा अनौठो घ’टना भएको छ ।महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धका अनुसार प्रेम सम्बन्ध सफल नहुने देखेपछि १९ वर्षीया थिङ थरकी युवतीले प्रेमीको लि’ङ्ग नै काटिदिएकी छन् । घ’टनामा मकवानपुर घर भइ बौद्ध बस्दै आएका २१ वर्षीय सुनुवार थरका व्यक्ति सख्त घा’इते भएका छन् । ती व्यक्ति काठमाडौंको एक होटलमा कर्मचारी हुन् । बौद्धका डीएसपी रमेशबहादुर सिंहका अनुसार सुनुवारको ओम अस्पतालमा आईसीयू कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार केटा क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्छन् भने युवती बौद्ध धर्मावलम्बी हुन् । एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरुबीच हालै विछोड भएको थियो । प्रहरीले युवतीलाई पनि प’क्राउ गरेको छ भने अ’पराधमा प्रयोग भएको च’क्कु पनि बरामद गरेको छ । यो पनि समाचार
काठमाडौं– महानगरीय अपराध महाशाखामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) जयनेपाल थापा ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिसँग लिएको ४० हजार रुपैयाँसहित इन्सपेक्टर थापा पक्राउ परेका हुन् । पूर्व सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काठमाडौंको टंगालस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले थापालाई घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको हो । कश्मीरमा बिहे गर्दैछन् रणवीर र आलिया ! रणवीर कपूर र आलिया भट्टको निकटता झनभन्दा झन् बढ्दै गएको छ । बलिउडमा यी दुईको जोडीको खुबै चर्चा हुने गर्छ । रणवीर र आलियाको परिवार पनि यी दुईको बिहेका लागि राजी भएको छ । परिवार चाहन्छन् कि, यो जोडीको छिटोभन्दा छिटो बिहे होस् । त्यसो त रणवीर र आलियाले आफ्नो प्रेम सम्बन्धका बारेमा खुलेर कुरा गर्ने गरेका छैनन् । तर, प्रेममा भएको संकेत छोडेका छन् । अर्कातिर द
भोलि विदा भन्ने हल्लामात्र, कसरी फैलियो विदाबारे हल्ला?
काठमाडौं। बुधबार समाचार पोर्टलहरुमा बिहीबार देशभर सार्वजनिक विदा भनेर समाचारहरु प्रकाशित भए। कुनै एक अनलाइनले लेखेको समाचार अरु अनलाइनले पुष्टि नगरी कपी पेष्ट गर्दै समाचारहरु बनाइरहे। बुधबार बेलुकासम्म विदाबारे सामाचार भाइरल बन्यो। तर, बिहीबार सरकारले भने विदा दिएकै छैन। गृहमन्त्रालयका सहप्रवक्ता उपसचिब उमाकान्त अधिकारीले बिहीबार सार्वजनिक विदा नदिएको डिसी नेपाललाई जानकारी दिए। खासमा बिहीबार विदा भएको समाचार भाइरल हुनुको कारण २०७५ मा भएको एक निर्णयले हो। तत्कालीन संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७६ मा थप गरिने विदाबारे एक निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयमा उँधौली पर्वका अवसरमा मंसिर २६ गते विदा प्रस्ताव गरिएको थियो। सो प्रस्ताव भने पारित भइनसकेकाले बिहीबार उँधौलीका अवसरमा सार्वजनिक विदा नहुने भएको हो। डिसि नेपालबाट
काठमाडौं । बुधबार (आज) साँझबाट नेपाल प्रवेश हुने पश्चिमी वायुको प्रणालीका कारण उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा भारी हिमपात र वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पूर्वानुमान महाशाखाले अधिकतम र न्युनतम तापक्रममा गिरावट आइ देशैभरी चिसो बढ्ने र यो प्रणाली बिहीबार अझै सशक्त हुनेसमेत जनाएको छ । हाल पूर्वी इरान र अफगानिस्तानमाथि रहेको पश्चिमी वायुको प्रणाली पूर्व सर्ने क्रममा रहेको जनाउँदै पूर्वानुमान महाशाखाले भनेको छ,‘‘यो प्रणाली पूर्व सर्दै नेपालको पश्चिमी भेगमा बुधबार साँझसम्ममा प्रवेश गर्ने देखिन्छ । यस प्रणालीका कारण नेपालका पश्चिमी उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा भारी हिमपात हुने सम्भावना छ । यो प्रणाली बिहीबार अझै सशक्त भई देशका मध्य र पूर्वका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा समेत हिमपातको सम्भावना रहेको छ । उक्त प्रणालीका कारण देशैभरी बदली भई अधिकतम र न्युनतम तापक्रममा गिरा
बुटवल – सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पदमप्रसाद वैदिक न्यायाधीश हुने सम्भावना न्यून रहेको खुलासा गरेका छन् ।आलोचनात्मक अवस्थामा वैदिक न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने उनले बताए । वैदिकलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जोडबल गरेपनि अन्ततः प्रचण्डको सपना चक्नाचुर हुने भएको छ । ‘उहाँ (पदमप्रसाद वैदिक) न्यायाधीश बन्ने सम्भावना ९९ प्रतिशतै छैन,’ उनले भने, ‘बरु अब कसलाई न्यायाधीश बनाउने हो, बसेर छलफल गरौं ।’ सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुने आकांक्षासहित वैदिकले न्याय परिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले नै केही दिनअघि परिषद् बैठकमा वैदिकको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर उपप्रधान एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादव र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुम
भोली देशभर सार्वजनिक विदाको घोषणा
सरकारले नेवार र किराँती समुदायलाई बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। य:मरि पुन्ही, उधौली, ज्यापु दिवस, धन्यपूर्णिमाको अवसरमा यी पर्व मनाउने समुदायका लागि बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिइएको हो। सार्वजनिक बिदा घोषणा नगरे पनि सरकारले ती पर्व मनाउनेका लागि मात्रै बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए। पर्व मनाउनेहरूका लागि मात्रै बिदा दिइएको हो’ उनले भने, ‘सरकारले सबैलाई बिदा दिएको छैन। क्याबिनेटले सार्वजनिक बिदा तोकेको छैन।’ क्यालेन्डर अनुसार नै सम्बन्धित जात, धर्म भूगोल भएकालाई मात्रै बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यो पनि समाचार चर्चित अभिनेता, लेखक, संगीतकार तथा टेलिभिजन प्रस्तोता रिचर्ड ओ ब्रायन जसलाई झट्ट हेर्दा पुरुष हो कि महिला हो भनेर छुट्ट्याउन गाह्रो पर्ने गर्छ । सन् १९७३ मा उनले एक सांगीतिक स्टेश शो ‘द रकी हरर शो’ लेखेका थिए
काठमाडौं : नेपालका बैंकहरु ह्‍याकरको आक्रमणमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन। केही समयअघि निजी बैंकमाथि धावा बोलेका ह्‍याकरहरुले पछिल्लो पटक सरकारी बैंकमाथि आक्रमण गरेका छन्। सरकारी लगानी रहेको कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्‍याक गरेर ह्‍याकरहरुले १४ करोड ६७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ लुटेको खुलेको छ। विदेशी ह्‍याकरहरुको समूहले नेपालस्थित विभिन्‍न ४० भन्दा धेरै व्यक्तिहरुलाई एजेन्टका रुपमा प्रयोग गरेर कृषि विकास बैंकबाट रकम लुटेका हुन्। लुटेराहरुले सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुक, भाइबर, ह्वाटसप ईमोमार्फत् चिठ्ठा परेको बताएका थिए। त्यससँगै पार्सल आएको भनेर प्रलोभन देखाउँदै ठगी गरेको पनि खुलेको छ। प्रहरीले कृषि विकास बैंकमा भएको ह्‍याकबारे अनुसन्धानबाट खुले पनि अन्य बैंकबाट पनि रकम लुटिएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीका अनुसार ह्‍याकरले कृषि विकास बैंकसँगै पानस
१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत अन्तिम दिनको भिडन्त सकिँदा नेपालले ५१ वटा स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको छ। नेपालमै सन् १९९९ मा भएको साग भन्दा २० वटा धेरै स्वर्ण पदक नेपालले जित्न सफल भएको हो। तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष फुटबल खेलमा नेपाली राष्ट्रिय यु–२३ फुटबल टोलीले भुटानलाई हराउँदै स्वर्ण पदक जितेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको फाइनल खेलमा नेपालले भुटानलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गदै स्वर्ण पदक जितेको हो । नेपालले सागअन्तर्गत पुरुष फुटबलमा लगातार दोस्रो पटक स्वर्ण जितेको हो । यसअघि सन् २०१६ मा भारतमा भएको सागमा पनि नेपालले स्वर्ण पदक जितेको थियो । नेपालको जितमा अभिषेक रिजाल र सुनिल बलले गोल गर्नुभयो । भुटानका लागि भने चेन्चो ग्यालसेनले गोल गर्नुभएको थियो । खेलको १६ औँ मिनेटमा अभिषेकले करिब ६ यार्ड बक्स नजिकबाट गोल गर्दै नेपाललाई पहिलो अग
कोहलपुर, २४ मंसिर । बाँकेको कोहलपुरमा दुई दिन अघि भएको दुर्घ टना पछि उत्पन्न परिस्थिति सेलाउन नपाउँदै फेरी अर्को दुर्घट नामा एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कोहलुरमा मंगलवार बिहानै दुर्घ टनामा परी सुवास कार्कीले ज्यान गुमाएका छन् । साढे १ बजे तिर कोहलपुरको चौराहमा भे ७ प २१५५ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घ टनामा परी २३ वर्षीय काकीको ज्यान गएको हो । उनको दुर्घ टना स्थलमा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । कोहलपुर जिल्ला ट्राफिक कार्यालय प्रमुख पविन्द्र बमले गाति तिव्रका कारण दुर्घ टना भएको बताए ।उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्षका छोरा रहेको स्थानिय नेताहरुले जनाएका छन् । नेकपाका वडाध्यक्ष तिलकसिंह कार्कीका २३ वर्षीय छोरा कार्कीको निधन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका नेताहरुले दु ख ब्यक्त गरेका छन् । कार्की स्थापीत साईकल व्यावसायि पनि हुन् । र्यट
जनकपुरधाम : १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत कुस्ती खेलको उद्घाटन समारोहमा नपड्केको पटाका लिएर पड्काउने क्रममा घाइते भएका एक बालकको मंगलबार मृत्यु भएको छ। जनकपुरधाम १३ स्थित कबर्ड हलनजिकै घर भएका निर्मला राउतका घाइते १० वर्षीय छोरा आलोक राउतको मृत्यु भएको हो। सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा उपचारकै क्रममा बालक राउतको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकरप्रसाद साहले जानकारी दिए। मंसिर २० गते कुस्ती खेलको उद्घाटनका क्रममा पटाका पड्काइएको थियो। सोमध्येका पड्किन नसकेका पटाका बालक राउत घरमा लगेर पड्काउन खोजेका थिए। पटाका पड्केपछि घाइते भएका बालकको पेट जलेको थियो। गम्भीर घाइते भएका बालक राउतलाई तत्कालै प्रादेशिक अस्पताल ल्याएको थियो। तर, उपचार सम्भव नभएपछि केहीबेरमै धरान ‘रेफर’ गरिएको थियो। उद्घाटनका क्रममा पटका पड्काउनेहरूको ला